यौ न क्षमता बढाउन खानुहोस् यी ९ खानेकुरा - Tufan Media News
यौ न क्षमता बढाउन खानुहोस् यी ९ खानेकुरा
३ श्रावण २०७७, शनिबार ०८:३६
हरेक मानिस यौनको मामलामा क्षमतावान् रहन चाहन्छ । पार्टनरसहित आफैलाई सन्तुष्ट पार्ने उसको चाहना हुन्छ ।
तर कमजोर यौ नक्षमताका कारण मानिसको यौ न जीवन सन्तोषमय हुँदैन । यदि कमजोर यौन क्षमता विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने यी वस्तुको सेवन निकै उपयोगी साबित हुनेछ ।
१.केरा: पोटासियम लवणको सबैभन्दा ठूलो श्रोत केरा हो । उच्च सोडियमयुक्त खानेकुराले शरीरमा पर्ने नकारात्मक असर घटाउँनुका साथै नुनको ख राब असर घटाउँछ ।
धेरै नुनिलो खानेकुरा खानाले यौ नांगमा रक्तप्रवाह घट्न गई यौ नेच्छा तथा चरमोत्कर्षमा कमी आउँदछ । तर केराको सेवनले रक्त प्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
२. दालचिनी : दालचिनीको सेवनले मानिसमा यौ नेच्छा बढाउन तथा यौन क्षमतामा वृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ । विशेषत: पुरुषले चिया तथा कफीमा दाल चिनी मिसाएर खानु उत्तम हुन्छ ।
३. चकलेट : जोडीबीच उपहार दिइने चकलेटमा पनि यौ न शक्तिको श्रोत मानिन्छ । चकलेटमा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व हुने भएकाले यो मुटुका लागि समेत उपयोगी हुन्छ । चकलेटको सेवनले शरीरबाट मूड जगाउने रसायनको उत्पादन गर्दछ । यसले यौ नइच्छा बढाउँछ ।
४. खरबुजा : खरबुजामा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । खरबुजालाई यौ नशक्तिको श्रोत मानिन्छ । यसको सेवनले यौ नक्षमता वृद्धि गर्न ठूलो सहयोग गर्दछ ।
५. आलु : आलुमा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ । आलुको सेवनले पनि रक्तप्रवाह बढाउँछ । तसर्थ आलुको सेवन पनि यौ न क्षमता बढाउन उपयोगी मानिन्छ ।
६.फर्सी : फर्सीको नियमित सेवनले यौ न क्षमता बढ्ने गर्दछ । फर्सीको बियाँमा शरीरलाई आवश्यक ट्रिप्टो फ्यान नामकएमिने एसिड पाइन्छ ।
यसले मस्तिष्कमा सेरोटोनिन हर्मोन उत्पादन तथा शरीरमा त्यसको प्रशारण गर्न सहयोग गर्दछ । यसले पुरुषहरुमा यौ न क्षमता वृद्धि गर्दछ ।
७. पालुंगो : पालुंगोको सेवनले यौ नांगमा रक्तप्रवाह बढाउँदछ । यसको सेवनले मूड पनि राम्रो बनाउँछ । यसमा पाइने म्याग्ने सियम लगायतका लवणले रक्तनली सुन्निने समस्या पनि हटाइदिन्छ । रक्तप्रवाह बढ्दा मानिसमा यौ न इच्छा तथा यौ न क्षमता दुवैमा वृद्धि हुन्छ ।
८. खुर्सानी : खुर्सानीले इन्डोफिर्न हर्मोन सक्रिय पार्दछ । यसबाट शरीरमा पसिना छुट्ने र मुटुको गति बढ्ने गर्दछ । यसबाट यौ न क्रिडाका लागि आवश्यक रक्तप्रवाह बढ्न जान्छ ।
९. ग्रीन टी : ग्रीन टीमा क्याटेचिन्स नामक यौ गिक पाइन्छ । यसले पेटको बोसो गलाउने, कलेजोको क्षमता बढाउने तथा बोसोलाई उर्जामा बदल्ने काम गर्दछ । यो यौगिकले यौ नांगमा रक्तप्रवाह बढाएर यौ न इच्छामा वृद्धि गर्दछ ।